Transportgbọ njem ọha na eze n'oge ụbọchị Bayram na Kayseri - RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region38 KayseriTransportgbọ njem ọhaneze N'oge Bayram N'oge Kayseri n'efu
09 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 38 Kayseri, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Ụzọ Awara Awara, KENSİÇİ Rail Systems, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey, tram 0
njem ọha na eze n’oge ezumike
Onye isi obodo nke Obodo Kayseri Memduh Büyükkılıç mara ọkwa na ụgbọ njem ọha na-agaghị akwụ ụgwọ n'oge Eid al-Adha. Onye isi obodo Büyükkıl that kwuru na ụmụ amaala na-eji bọs na ọdụ ụgbọ oloko nke Obodo ukwu ga-erite uru site na ụgbọ njem ahụ n'efu.
Onye isi obodo nke Obodo ukwu Memduh Büyükkılıç kwuru na ngwa n'efu na njem ga-amalite na 00.00, nke jikọtara Arife na ụbọchị mbụ nke Eid al-Adha, na 14, ụbọchị ikpeazụ nke Eid al-Adha, ga-akwụsị na 24.00 na Wednesde.
Onye isi ala Memduh Büyükkılıç, ngwa n'efu na ụgbọ njem ọha, naanị ụgbọ ala Kayseri Metropolitan na ụgbọ ala ọha ga-aba uru na ntinye akwụkwọ ahụ kwuru na bọs nkeonwe.
Ụgbọ okporo ígwè na-ebu ndị njem 60 puku mmadụ n'oge oriri ahụ 14 / 08 / 2013 Ụzọ ụgbọ okporo ígwè na-eme ememme ofụri 60 puku njem iga: Transport, Mbupu na Communications Minister Binali Yildirim, ebe ọ bụ na ụbọchị ya meghere elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè na-ekwu na 11 nde 500 puku njem ụgbọ, "Anyị na-ebu Day n'oge 60 puku njem. Ntukwasi-obi anyị ụbọchị 660 ụgbọ okporo ígwè ụmụ amaala ugbo ala," ka o kwuru . Transport, Maritime Affairs na Communications Minister Binali Yildirim, 'ọnụ ọgụgụ nke ụgbọ oloko na njem ahụ mere na Ramadan' na ya nkọwa, dị ka ndokwa ụgbọ okporo ígwè na-ekwu na ọrụ n'ụzọ zuru okè ma full, ga-anọgide na-agbasa ha ulo oru mbo ke ụgbọ okporo ígwè na isi ezumike nke Marmaray na Ankara-Istanbul High Speed ​​Train ga-emeghe ya na ndị a kọrọ. Ụgbọ njem niile site na 2003 ...
MGBE ANYA NA-ACHỌGHỊ ANYỊTA na ụgbọ ala red na-enweghị onwe ha n'oge ememe ahụ 04 / 07 / 2016 ANTRAY, nostalgic tram na-acha uhie uhie ụgbọ ala free n'oge ememe: Antalya Metropolitan Municipality n'ime akporo nke ndokwa mere site Oriri nke Ramadan, ndị uwe ojii, firefighters na ASAT nkeji nke ọrụ dechara, na ụgbọ ala ekesịpde site na obodo, a kọrọ na free mgbagharị ga-eburu unu site oriri ANTRAY na nostalgic tram. Dika ihe edeputara edeputara site na Obodo Metropolitan, ndi oru na aru oru nke ndi uweojii na-eme obodo a ga-aga oru. Ìgwè oriri n'ihu, karịsịa Eve ụbọchị na-emeghe nri na onunu mmepụta ga-eji ike ya inspections na iche na-arụ ọrụ ahịa na n'oge ememe si Eve ụbọchị Uncalı n'ili nke ụmụ amaala na leaded na Andızl na-eli ozu na-dị mkpa jikoro na-enwe ike ịga na ala. ...
Usesgbọ ala ndị si Kayseri Obodo ukwu
ụgbọ okporo ígwè kayseri
N'oge Kayseri Bayram Ọdụ Publicgbọ njem Ọha n'efu
Ationgbọ njem ọhaneze bụ n'efu na Kayseri
Ụgbọ okporo ígwè na-ebu ndị njem 60 puku mmadụ n'oge oriri ahụ